1.3 Vabakutseline ajaveeb
3.1 I-toote idee nr 1: e-raamatud / Amabhuku
3.2 I-toote idee nr 2: I-veebiseminarid / Izifundo ze-Inthanethi
3.3 I-toote idee nr 3: juhendamine / nõustamine
3.5 Umkhiqizo we-Idee # 5: Imidwebo Ehlanganisiwe & Izinto Zokwakhiwa Kwewebhu
3.6 I-idee yomkhiqizo # 6: Isithombe
Okuthunyelwe okuxhasiwe kukuhle ukufunda ukuthi ungasebenza kanjani futhi ubonise umkhiqizo, kodwa amakhasimende abhekeke angafuni ukubona okuningi kulawa kubhulogi yakho (i-20% exhasiwe ku-80% entxhasiwa ib "kuhle"), futhi ayifuni ukubona izethulo zokuncintisana. Okuthunyelwe okuxhasiwe kungase kungabuyiseli ukubuyisa okukhulu ngesikhathi sakho sokutshalwa kwezimali. Uma iklayenti ikukhokhela i- $ 100, futhi uchitha amahora amahlanu usebenza kulowo msebenzi, kusukela ekuthengeni komkhiqizo kuya kokuthunyelwe okuhlelekile, uyenzela u- $ 20 ngehora. Umzamo kungenzeka ukuthi awufanele ukukhokha.
Lokhu kubonakala sengathi kungenayo imali elula, kepha imithetho ingashintsha izinjini, imithombo yezokuxhumana / ividiyo, izidingo ze-FTC, ukumaketha kwe-imeyili kanye nenhlangano yakho yokubambisana kungaba inslele. Udinga ukuhambisana nalabo futhi ugcine engqondweni uma izixhumanisi zakho ziphela. Futhi khumbula, ukuthi izivakashi nemikhiqizo babheka lokhu njengenkxaso. Ngokuvamile ithatha izilaleli ezinkulu (ukubukwa kwekhasi le-100 000) ukwenza okungaphezu kwama-dollar ambalwa ngokuthunyelwe.
Nakuba akudingeki ulahle amaphrojekthi afana nalawa, ukuthengisa imikhiqizo yakho kuzonikeza umthombo ongcono wemali engenayo. Natsi izinzuzo:
Umkhiqizo wakho ungaba isikhathi eside noma esifushane njengoba udinga, ungaba nemininingwane enhle kakhulu, ingahle ibuyekezwe njengoba ubona kufanelekile, noma ungadala izinguqulo ezintsha ngokusekelwe ekubukeni kwezilali. Futhi kuye ngokuthi uhambisa kanjani umkhiqizo wakho, uzoba nokulawula amanani futhi ugcine iningi noma yonke inzuzo.
Ubuchwepheshe bakho bungakuseta kahle kakhulu ukuze uthengise izinhlobo ezithile zezinto. Uzodinga ukugxila endaweni lapho unesipiliyoni khona futhi wakhe umkhiqizo ozungeze amakhono akho ne-nišš: ukuba ngumzali, ukupheka, ukwenza isikole, njll.
I-toote idee nr 1: e-raamatud / Amabhuku
Ama-e-raamatud amahle ngoba ashesha futhi alula, futhi angaholela ezintweni ezifana nomsebenzi wokukhuluma noma okunikezwayo okungenzeka ukushicilelwa. Kodwa-ke, uhlala wedwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni, ngakho-ke qiniseka ukuthi uqasha usizo lokuklama, ukuhlela nokwenza ubufakazi. Uzodinga futhi uthathe isinqumo sokuthi uzowenza yini noma cha ukuzishicilela. Ungadinga ukugcina iphuzu lentengo liphansi. Ukwengeza, ungase ufune ifomethi engadluli kalula kwabanye, njenge-PDF. Ungasebenzisa okuqukethwe kwebhuku njengomlingo wokuhola wamahhala wokuheha ababhalisile.
I-toote idee nr 2: I-veebiseminarid / Izifundo ze-Inthanethi
Izifundo nama-veebinaarid akuvumela ukuthi ukhokhe imali eningi. Indlela elula yokusetha eyodwa ukunikeza uhlelo lokuqeqesha i-imeyili, ukuhambisa amamojuli amasonto onke. Uma unokuqukethwe okwanele kubhulogi yakho, ungakwazi ukuthatha inqwaba yezinto ezivela kuso. Ama-veebiseminarid aphile bukhulu kodwa kunzima kakhulu futhi isikhathi esiningi kodwa ungakwazi nikeza ukuqeqeshwa kwamahhala ukudayisa inkambo yakho egcwele. Khumbula ukuthi uzodinga ukusekela abafundi bakho uma benemibuzo noma izinkinga.
I-toote idee nr 3: juhendamine / nõustamine
Lokhu kuyithuluzi elihle lomuntu onamakhono akhethekile, aqeqeshiwe (isibonelo, ukupheka kwe-glute mahhala noma ukucindezeleka okukhululekile kokubeletha) nokuqeqeshwa okuningi koqeqeshi okutholakala ukuthi. Kudingeka ube ngabantu bemi, futhi, futhi uhlele izikhathi ezizwakalayo zokutholakala kwakho nokuthi yini oyikhokhayo. Yazi indaba yakho ngokujulile futhi ulindele ukuba nabaqaleleli abaphelele abazobhekana nokucabanga okuyisisekelo.
Ninabangane abaningana abathengisa izinto zezinto sellesziwe ngezandla nge-Etsy, kusuka ezikhwama kuya kufenisha. Kuzodingeka ucabange izindleko zokudiliva kanye nesikhathi sokukhiqiza nokuthi uzokuthengisa kanjani imikhiqizo yakho.
Umkhiqizo we-Idee # 5: Imidwebo Ehlanganisiwe & Izinto Zokwakhiwa Kwewebhu
Ababhulogi abaningi bafunda banothando lokuchofoza ikhodi noma ukuklama ihluzo. Unganikeza amaphakheji afana ne-WordPressi teemad, isethi yezithonjana noma ukugcinwa kwebhulogi. Uma unav-Savvy, ungacabangela amasayithi wokwakha kusukela ekuqaleni noma umklamo we-logo. Lezi zinketho zidinga izings eliphakeme lamakhono, ngakho-ke uqeqesha okuningi ngangokunokwenzeka futhi usebenzise isofthiwe yezobuchwepheshe uma ungakwazi ukuyikhokhela.
I-idee yomkhiqizo # 6: Isithombe
Lena enye indawo ababhalisi abaningi abangena kuyo ngenzuzo. Ngingeke ngihambe ngale ndlela ngaphandle kokuba okungenani unekhamera ye-DSLR enezilonda ezithengiwe ngokwehlukana, futhi wazi ngempela izisekelo eziyisisekelo zokudlala izithombe, njengokungathi ukukhanya komuntu nokusa. Ungathumela izithombe zakho bese uyithengisa ngezinye zezindlu ezinkulu zesitoko.
Uma usukhethile umkhiqizo omuhle me nišš yakho kanye nesethi yakho yamakhono, uzodinga ukuthola ukuthi uzothengisa kanjani umkhiqizo wakho.
Izindlela ezifanayo zokuthengisa zisebenza njengokubhalisa: thola imakethe yakho ehlosiwe, yakha umlenze oholayo kanye nekhasi lokufika futhi wakhe uhlu lwakho lwe-imeyili. Ibhulogi yakho isheshayo ithuluzi lokumaketha kodwa gcina izwi lakho futhi usebenzise nišš efanayo, ngenkathi ususa umkhiqizo wakho kokuqukethwe kwakho.
Ukuthola imali ngokuthengisa imikhiqizo yindlela esheshayo yokuthola imali engageguquki, engenayo ethembekile. Khumbula ukuthi ibhulogi yakho ekhona isivele ihloswe ukuthengisa noma yini elayishwa-laser kulabo abalaleli bakho bamanje. Lokhu kuzokusiza ukuba ucabange futhi udale imikhiqizo activkwazi ngisho nokuphuma kubhulogi yakho.